About Us - Ningbo Zhongyi Plastika Co., Ltd
Ningbo Zhongyi Plastika Teknolojia Co., Ltd dia manam-pahaizana ny plastika mpanamboatra vokatra ary koa developer ny lasitra. Izahay no nanao ny tenantsika ho amin'ny fikarohana, famolavolana sy ny varotra ny recyclable pitaovana ampiasaina fonosana vokatra, afaka hisolo ny indray mandeha amin'ny fanodinana fonosana fonosana fitaovana rafitra. Tsy mikendry ny hanome kalitao avo sy ny Eco-namana vokatra sy ny Super fanompoana ny mpanjifa monina na any Shina sy ampitan-dranomasina eo amin'ny lafiny warehousing, fizarana sy ny rafi-pitaterana recyclable. Ny fikarohana sy ny famonoana ny plastika pitaovana totes mahatonga antsika handray ny toerana mahasoa eo amin'ny orinasa. Mandritra izany fotoana izany dia foana ny mijery manome endrika miavaka tolo-kevitra ho an'ny indostria manokana sy ny mpanjifa. Ny vokatra namidy hatrany Alemaina, Holandy, Belzika, Etazonia, HK, etc.
Isika ihany maherin'ny 20 solosaina-maso plastika injectors ny fahafahana ny 100-10000 gram. Efa nahazo 6 departemanta nanangana, famokarana sampan-draharaha, R & D (ho an'ny entana vaovao & CAD / CAM lasitra), Import & fanondranana, varotra an-trano, QC, trano fitehirizana & fitaterana. Efa nahazo fahafahana tsara ny orinasa mpamokatra entana, sy ny trano fitehirizana & fitaterana. Fanao isan-taona ho an'ny fahafahana tote famokarana Hits 8 tapitrisa eo ho eo isan-taona sy ny fahafahana dia toy ny avo tahaka ny 20000 taonina.
Ny filamatra hoe "ny olona, ​​Fanavaozana sy Quality". Manantena izahay fa afaka hanorina maharitra sy ny namana fandraharahana fifandraisana amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao ny fiaraha-mientana ifampizarana liana.